Duulimaadyada Baska Dheeraadka ah ee Xarunta Sakkient Ski
Antalya Metropolitan Municipal, ee loogu talagalay ardayda ku faraxsan kaarka warbixinta inta lagu jiro simistarka Saklıkent Ski Center ayaa safarada dheeri ah geliyey gaadiidka dadweynaha. Dowlada hoose ee magaalada Antalya ee caruurtu si ay ugaga faa iideystaan ​​fasaxa semesterka [More ...]
Kobanhe waxay jeclayd KOBX
KOBİS (Nidaamka Gaadiidka Baaskiilka Kocaeli) Mashruuca oo ay hirgalisay Kocaeli Magaalo-weyne ee Magaaladda Gaadiidka Dadweynaha ayaa soo jiidatay dareen weyn. Mashruucu wuxuu ka bilaabay Izmit ka dibna wuxuu ku fiday degmada 12. Saldhigyo cusub [More ...]
Bisiklet BİSİM bisiklet, nidaamka kirada baaskiilka ee İzmir Magaalo-Weyne ay ku darsatay adeegga 18 Janaayo 2014, 5. 1 milyan oo sano jir ah ayaa gaadhay 622 kun oo isticmaale. Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir, oo qaaday talaabooyin muhiim ah bartilmaameedka “Baaskiil Magaalada, [More ...]
Halkalı-Çerkezköy Ammaanka Qadka Tareenka
CHP Tekirdag Ku xigeenka Candan Yüceer Halkalı- Çerkezköy Kalsooni darida khadka tareenka ayaa u wareegay ajandaha Golaha. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Mehmet Cahit Turhan, oo ka codsaday Baarlamaanka inuu ka jawaabo su'aasha Halkalı-Çerkezköy [More ...]
Wasiirka Turhan, wuxuu sahamiyey wadooyinka wadada ee Antalya
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Antalya Northern ring Road, Wadada Antalya-Burdur iyo isgoysyada jidkan ayaa abuuri doona xasillooni weyn xagga gaadiidka, ayuu yiri. Wasiirka Turhan, Antalya iyo Wadada Waqooyiga Ring [More ...]
Si dhakhso ah tareenka uga soo kaxee Antalya ilaa İzmir
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, ayaa yiri: “Waxaan qorsheyneynaa inaan Antalya ku xiro İzmir jidka weyn iyo tareenka xawaaraha sare mustaqbalka dhow. Howlahayaga mashruucyada la xiriira tan waa sii socdaan. Xilliga soo socda [More ...]
Guriga Caruurta ee IMM, simistarka ayaa buuxa
Golaha Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Caasimadda ah ee Istanbuul ayaa u diyaariyey howlo taxane ah xubnahooda sababo la xiriira nasashada simistarka. Boqolaal caruur ah ayaa ka qeyb qaadan doona nashaadaadyada, booqashooyinka madxafka, safarada quraaradda, dhacdooyinka isboortiga iyo maktabadaha Ottoman ayaa noqon doona barnaamijyada dalxiiska. [More ...]
Maanta taariikhda: 18 Janaayo 1909 ee Ciraaq oo ku yaala magaalada Mebusan taariikhda
Maanta oo ku taal Taariikhda 18 Janaayo 1909 Barlamaanka Baqdaad, Ismail Hakkı ee Baqdaad wuxuu sameeyay soojeedin su'aal ku saabsan wadada tareenka ee Baqdaad. Golaha Dastuuriga ah wuxuu su’aal ka keenay oo dhaleeceeyey mudnaanta la siiyay shisheeyaha. Kormeerka Maaliyadda Maamulka Tareenka ee Hamidiye-Hicaz [More ...]